Arsenal Way Garaacaysaa Mourinho iyo Kooxdiisa Chelsea – Wenger
HomeWararka MaantaArsenal Way Garaacaysaa Mourinho iyo Kooxdiisa Chelsea – Wenger
23/04/2015 Abdiwahab Ahmed
Arsene Wenger ayaa ku adkaysanaya in uu jebin doono rikoodhka Jose Mourinho ee ah in mar kasta oo uu ka hor yimaaddo Wenger uu ka badiyo, waxaanu u sheegay ciyaartooyada kooxdiisa in ay niyaddooda geliyaan in ay Emirates Stadium ku garaaci doonaan Chelsea Axadda soo socota.
Wenger iyo kooxdiisa ayuu Jose Mourinho garaacay 12kii ciyaarood ee u dambeeyey ee ay isaga hor yimaaddeen, kaliya shank a mid ah ciyaarahaas ayay barbar dhac galeen, halka toddobada kalena ay Chelsea guul gaadhay.
Sidaas oo ay tahay, ayuu tababaraha Arsenal ku adkaysanayaa in Axadda ay maalintiisii noqon doonto marka ay labada kooxood foodda is daraan.
“12 jeer oo aanu isku daynay, macnaheedu maaha in aanu mar walba guul darraysanay, waanu isku dhoweyn uun. Bandhig ciyaareedka Axadda ayaa noqon doona natiijada maalintaas. Marxalad fiican ayaanu ku jirnaa waxaananu haysanaa fursad ah in aanu gurigayaga ku garaaci karayno oo aanu dhibcaha ku qaadanno.” Sidaas ayuu yidhi Wenger.
“Marxallad fiican oo ciyaareed, is aammin iyo sinnaan ah ayaanu ku jirnaa. Waxaanu ka soo gudubnay tijaabooyin badan dhowaanahan markii su’aalaha layska kaaya weydiinayey. Tijaabo kale ayaa nah or taalla Axadda, waana in aanu ka gudubno.” Ayuu raaciyey.
Wenger waxa uu sheegay in Chelsea ay ku xooggan tahay weerarka rogaal-celiska degdegga ah, madaxa iyo kubbadaha goolka hortiisa la mariyo, laakiin ay naafayn doonaan meelaha ay ku xooggan yihiin oo dhan.
Mourinho oo su’aal laga weydiiyey xidhiidhka ka dhexeeya tababare Jose Mourinho ayaa waxa uu diiday in uu ka hadlo, waxaanu yidhi: “Ma doonayo in aan ka hadlo arrimahaas. Waxa kaliya dadka xiiso gelinayaa waa marka ay ciyaartu bilaabanto 4pm ee aanu ciyaar fiican soo bandhigo. Arrintu ma ahaan doonto wax labada tababare u dhaxayn doonta.
Arsenal oo kaalinta labaad ee Premier League ku jirta ayaa 10 dhibcood ka hoosaysa Chelsea oo hoggaanka haysa, waxaana iska cad in aanay jirin wax rajo ah oo ay Arsenal ka qabto in ay koob ku qaaddo sannadkan, laakiin tababare Wenger ayaa aaminsan in xisaab ahaan haddii la eego ciyaaraha hadhay ay weli suurtogal tahay in ay soo qabtaan Chelsea.
Wenger waxa uu sheegay in Chelsea ay wali joogtaynayso ciyaartii fiicnayd ee ay horyaalka ku bilowday, khaasatan difaaca oo uu tilmaamay in ay aad ugu xoog badan tahay, ayna adag tahay in goolal laga dhaliyo.
Arsenal wax aka maqnaan doona ciyaarta Axadda labada ciyaartoy ee Alex Oxlade-Chamberlain iyo Mikel Arteta, waxa kale oo uu shaki ku jiraa Per Mertesacker oo aan wali ku soo laabanin tababarka isagoo dhaawac ka cabanaya.
Man United Oo U Sheegtay Adnan In Aanu Boos Heli Doonin
23/12/2014 Abdiwahab Ahmed
Cajiib! Taageereyaasha PSG Oo Cay U Miisay Neymar Markii Uu Dhaliyey Goolka 4aad
18/01/2018 Abdiwahab Ahmed
Nike Oo Daah Furtay Kubadaha Cusub Ee Lagu Ciyaarayo Horyaalada Premier League, La Liga iyo Serie